Taliyihii Baan Bayda Ciidanka Dawlada Somaliya ayaa La dilay Caawa | maakhir.com
Taliyihii Baan Bayda Ciidanka Dawlada Somaliya ayaa La dilay Caawa
February 25, 2008 in Somalia
Muqdisho:- Sida ay sheegayaan war haatan naga soo gaadhay Magaalada Caasimada ah ee Muqdisho ayaa sheegaya inuu goor dhawayd Tacshiirad lala Beegsaday ku dhintay Taliyihii Ciidanka Baan Beeyda ee Dawlada Somaliya, Falkaasi ayaa waxa gaystay Koox hubaysan oo aan la aqoon haybtooda Saxdaha, waxana uu Falkaasi dhacay xili uu Taliyihu ku sii jeeday Hooygiisa.
Taliyahaan ayaa lagu magacaabi jiray Cabdi Kaahiye oo ku magac dheere (Harag Shabeel) waxaana dilka geystay rag ku hubeysabn baskoolad waxaana la ogeyn ujeeda ka dambeysa dilka Taliyihii ciidamada Booliska.
Dada goob jooga yaal ah ayaa sheegay inay dilkasi gaysteenn kooxo hubaysan kuwaasi oo la sheegay inay wateen Baabuur yar oo qafilan kuwaasi oo marii ay falkaasi gaysteen Baxsaday.
Dilka Taliye Harag Shabel ayaa ka dhacay Agagaarka Degmada Xamar Jajab oo la sheegay inuu ku dhawaa Gurigiisu, waxa la cadeeyay inay ragaasi si kadis ah ku soo galeen meel Goolad ah oo markaasi Taliyuhu marayay.
Dhamaan goobtii uu falkaasi ka dhacay caawa ayaa waxa markiiba soo gaadhay Ciidamada Dawlada Somaliya kuwaasi oo gaashanaya kuwa Dawlada Somaliya, waxayna isla markiiba sameeyeen baadhitaano xoogan oo ku baadi goobayaan dadkii Falkaasi ka danbeeyay.
Dhamaan Xaalada Guud ee Magaalada Muqdisho ayaa ah mid Cakiran oo ay jiraan dhaq dhaaqa ciidan oo aad u xoog badan, dadka iyo Gaadiidka ayaa baadhitaano xoogle lagu wadaa iyaga oo ay jiraan Bandaw xoogan oo la saaray goobaha Ganacsiga qaarkood.
« Gobolka Sanaag oo ay ka curnteen Dagaalo Ba”an
Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland oo wali Badhan ku sugan iyo Dadka oo aad u soo dhaweeyay »